Qorshaha Guud ee Jidka SR 167 – Maxaan ognahay ilaa hadda | WSDOT
Waa maxay qorshaha Guud?
Aragtida iyo yoolka
Waa maxay talaabooyinka qorshaynta?
Maxaan ognahay ilaa hadda
Ra’yigaaga nala wadaag
Qorshaha Guud ee Jidka SR 167 – Maxaan ognahay ilaa hadda
homeConstruction & planningOnline open housesQorshaha Guud ee Jidka SR 167Maxaan ognahay ilaa hadda
Maxay daraastay Waaxda Gaadiidka ee Gobolka Washington ilaa hadda?
WSDOT waxay wakhti ku qaadatay inay ka shaqeyso sidii ay u fahmi lahayd marxaladda hadda jirta iyo marxaladaha mustaqbalka jiri doona ee jidka SR 167.
Hawl gelinta Bulshada
WSDOT ayaa kulamo dhegeysi la yeelatay ururada bulshada. Ururadu waxay bixiyeen fikrado horudhac ah oo ku saabsan bulshooyinka jilicsan iyo kuwa culayska saran yahay ee kunool aagga daraasadda ee jidka SR 167. Mudnaanta sinaanta ee looga wada hadlay fadhiyada dhageysiga waxaa ka mid ahaa baahida loo qabo adeegyada laga helo guryaha ilaa gaadiidka dadweynaha, waddooyin badan oo tareen ah oo dhan marinka, gaar ahaan waddooyinka bari-galbeed, iyo baahida loo qabo helitaanka gaadiid wanaagsan oo xarumaha shaqada ah. Fikradaha kale waxaa ka mid ahaa saameynta ciriiriga taraafikada ee dhaqdhaqaaqa dadka iyo badeecadaha (gaadiidka xamuulka) ee agagaarka gobolka iyo tirada xaddidan ee fursadaha safarada firfircoonida (wadooyinka lugta, haadka baaskiilka, iyo wadiiqooyinka).
Xagaagan WSDOT waxa ay qaban doontaa tabobarro taxane ah ku wajahan bulshooyinka mudnaanta iyadoo loo fiirinaayo sinnaanta. Aqoon isweydaarsiyada waxaa loo isticmaali doonaa horumarinta iyo fahamka faa’iidooyinka xalka gaadiidka kala duwan, iyo in la ogaado xalka sida ugu wanaagsan u daboolaya baahiyaha bulshooyinka mudnaanta sinnaanta.
WSDOT waxay soo saartay xogta Bulshada oo tusinaysa dadka nugul iyo dadka culayska badani saaran yahay inay aad ugu badan yihiin aagga daraasadda marka loo eego afarta degmo ee Puget Sound Gudiga Deegaanka (Degmooyinka Snohomish, Kitsap, King, iyo Pierce). Dadka culayska saran yahay ayaa inta badan kunool woqooyiga khadka degmada King-Pierce ee ku dhex jira aagga Qorshaha Guud ee daraasadda jidka SR 167. Inta badan dadka nugul waxay u badan tahay inay qabaan welwel xagga badbaadada ah, caqabadaha tignoolajiyada, iyo kharashyada iyo caqabadaha waqtiga.
Isticmaalka Dhulka, Guryeynta iyo soo Koobidda Shaqada
Aagga daraasadda waxaa ka mid ah wax soo saarka iyo baqaarada/xarumaha qeybinta ugu weyn ee gobolka Waqooyi-galbeed ee Baasifigga. In ka badan saddex-meelood meel waxbarashada hadda shaqaalaysiinta waxay ku badan tahay xarumaha wax soo saarka. Aagga daraasadda waxaa jira ku dhawaad 236,000 cutubyo guryo ah iyo 401,500 shaqooyin.
Sannadka 2050, saadaasha ayaa sheegeysa in lagu qiyaasay 433,000 guri (kor u kac boqolkiiba 84 ah) iyo 645,300 shaqo (koror boqolkiiba 61 ah).
Jidka SR 167 waa marinka labaad ee gaadiidka xamuulka qaada ee ugu saxmadda badan gobolka, iyadoo ay isticmaalaan 10,000 oo baabuur maalintii. Socodkan gaadiidka xamuulka ahi waxa uu ka dhigan yahay 10-20 boqolkiiba dhammaan baabuurta waddada mara. Kaliya 9 boqolkiiba safarrada gawaarida xamuulka ah ayaa dhaafa, marka badi safaradu waxay ka bilowdaan kuna dhamaadaan aagga daraasadda. Qiyaasta xamuulka maalinlaha ah waxaa lagu qiyaasaa inay koraan ugu yaraan 50 boqolkiiba 2050.
Shabakadda Safarada ee Firfircoon
Shabakadda lugaynta iyo baaskiilku ma dhammaystirna wayna kala go’anyihiin sabab la xiriirta qaababka horumarinta xaafadaha. Ku dhawaad ​​kala bar waddooyinka deegaanka iyo isku xirka jidka SR 167 waxay leeyihiin waddooyin lagu lugeeyo oo ku yaal labada dhinac ee laamiga in ka badan kala barna gabi ahaanba malahan adeegyada baaskiillada. Dhowr waddo oo heer gobol ah oo ku taal aagga daraasadda ayaa bixiya xiriir wanaagsan oo ka dhexeeya guryaha iyo ganacsiyada, gaar ahaan kuwa baaskiilada kaxeeya.
Shabakadda Gaadiidka Dadweynaha
Raacista gaadiidka dadweynaha iyo adeegyada waxay ku urursan yihiin woqooyiga jidka SR 18. Jidadka raacitaanka ugu badan waxay ku wajahan yihiin waqooyi-koonfur, waxaana ka mid ah:
Leenka Sounder S ee Tareenka Sound
Jidadka basaska ee degmada King County 150, 160, iyo 165
Marka la gaaro 2050, waxaa jiri doona maalgashi tareen oo badan oo aagga daraasadda dhexdeeda ah. King County Metro iyo Pierce Transit waxay kordhin doonaan safarada bari-galbeed ee ku xira Sound Transit Link fidinta tareenada fudud.
Iyadoo ku saleeysan xogta, ku dhawaad aqlabiyada safarada jidka SR 167 waxay bilaabmaan ama ku dhammaadaan koonfurta jidka SR 18. Dad badan ayaa ku nool waqooyiga SR 18. Shaqooyin badan ayaa ku yaal waqooyiga SR 18.
Inta badan safarrada gawaarida xamuulka waxay ka bilowdaan ama meelo ka mid aagga daraasadda. meel ay u socdaan gudaha aagga daraasadda. Qaabka ugu muhiimsan ee safarrada gawaarida xamuulka ee meelaha fog fog waa inta u dhaxaysa bariga Washington iyo Dekedda Tacoma iyo meelaha kale ee koonfurta ka xiga I-5 iyadoo loo sii marayo jidka SR 167.
Safarrada firfircoonida (dadka socda, baaskiilka, iyo lugta) ayaa aad ugu uruursan agagaarka Xarumaha Kobaca ee Deegaanka.